Isbedelka CompuCoin ugu fiican
Bixinta ugu fiican CompuCoin qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso CompuCoin maanta.
Qiimaha ugu fiican ee la iibsado CompuCoin $ 0.000886040513078 CPN/BTC Cryptopia
Qiimaha iibka ugu fiican CompuCoin $ 0.000886040513078 CPN/BTC Cryptopia
Ugu fiican CompuCoin qadarka waxaa lagu go'aamiyaa natiijada wadaagga lammaanaha lacagta digital ee isweydaarsiga. Heerka sarrifka lacagaha ee hadda taagan CompuCoin waa celceliska sarrifka lacagaha ee dhammaan macaamil ganacsiyada. Qiimaha waxaa lagu go'aamiyaa dheelitirka saadka iyo baahida kaqeyb galayaasha suuqa. Isweydaarsiga kaladuwan ee kaladuwan ayaa leh heerar ganacsi oo kala duwan. Ugu fiican CompuCoin heerka waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la falanqeynayo qiimeynta sarrifka ee dhammaan isweydaarsiga lacagta digital. Markaa waxaad qaadan kartaa qiimaha ugu fiican.
Kombiyuutarka ugu fiican CompuCoin
Qiimaha iibsiga ugu fiican ee CompuCoin maanta waa $ 0.000886040513078 oo leh CPN/BTC ganacsiyo ah Cryptopia suuqa sarrifka.
Qiimaha iibka ugu badan ee CompuCoin maanta waa $ 0.000886040513078 oo leh CPN/BTC ganacsiyo ku saabsan Cryptopia suuqa kala iibsiga.
Booska ugu fiican CompuCoin boorsada waa fikrad shaqsiyadeed midkasta oo milkiile lacagta digital ah. Boorsada jeebka loo yaqaan 'Crypto wallet' waa koodh barnaamij loogu talagalay kaydinta, dejinta, bixinta lacagaha crypto. Boorsada jeebka loo yaqaan 'Crypto wallet' waxaa inta badan lagu go'aamiyaa fududeynta, isku hallaynta iyo amniga. Boorsada ugu wanaagsan CompuCoin boorsada ayaa leh kalsoonida ugu wanaagsan iyo dejinta amniga.
Suuqa ugu fiican CompuCoin
CompuCoin heerka ugu wanaagsan ee 18/01/2020 - ayaa lagu soo bandhigay jadwalkeena dhammaan sicirka heshiisyada isweydaarsiga maanta. Qiimaha ugu wanaagsan CompuCoin sicirka iibsashada iyo iibinta ee maanta 18/01/2020 waxaan ku soo bandhigaynaa meel gooni ah bogga. Jadwalka qiimeynta ugu wanaagsan ee CompuCoin waxaad arki kartaa qiimayaasha kala duwan ee CompuCoin. Waad dooran kartaa kuwa ugu fiican, oo isweydaarsiga ay ku fiican tahay in la helo isweydaarsiga lacagta digital. Tusaha khadka tooska ah "ugu wanaagsan ee CompuCoin" qiimaha ee maanta 18/01/2020 "ayaa si toos ah u falanqeynaya qiimayaasha ugu wanaagsan ee lacagta digital ee internetka.
Jadwalku wuxuu muujinayaa qiimaha sarrifka CompuCoin maanta oo dhan suuqyada lacagta digital. Heerarka sarrifka ee dhammaan ganacsiyada ganacsiga waxaa loo beddelaa Dollar.
Qiimaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado CompuCoin kuma koobna oo keliya doollar. Caadi ahaan, heerka iibsashada lacagaha lacagaha caanka ah wuu ka sarreyn karaa midka kale ee loo yaqaan 'lacagta digital'. Waxaan had iyo jeer soo bandhignaa heerka ugu fiican ee CompuCoin sicirka iibsashada marka loo eego dollar marka la barbar dhigo fudud. Maxaa lacag ah oo loo iibin karaa CompuCoin midka ugu jaban ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa xiga qiimaha ugu wanaagsan ee iibsiga. U dhaw sicirka iibka ugu wanaagsan ee lacagta digital waxaad ka heli doontaa isku xirka suuqa sarrifka kaas oo CompuCoin uu iibinayo qiimaha ugu fiican.
Sidoo kale, boggayagu wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan lacagta loogu talagalay CompuCoin waa la iibin karaa inta badan. Bandhiga isweydaarsiga waxaa lagu kala saaraa sicirka sarrifka ugu wanaagsan ee iibinta iyo iibsashada CompuCoin. Heerka waxaa lagu muujiyaa doollarka Mareykanka. Waad arki kartaa CompuCoin Macaamil ganacsi oo loo beddelo lacag kale ama lacagta digital haddii aad isticmaasho shaandhaynta lacagaha kale ee ku yaal miiska kor u dhaafka isweydaarsiga lacagta digital. Macluumaadka ku saabsan isweydaarsiga ugu wanaagsan ee iibsiga iyo iibinta CompuCoin ayaa lagu cusboonaysiiyaa khadka tooska ah oo had iyo goor waa isbedelaa.